WunZinMin Raja ဝန်ဇင်း မင်းရာဇာ: 2016
Posted by Burman Managers,Engineers and Scientists at 7:18 PM No comments:
လူ မဆန် တဲ့ အပြု အမူ များ ကို ရပ် တန်း က ရပ် ကြ ပါ။
ငြိမ်း ချမ်း ရေး ဆွေး နွေး ရာ မှာ မကြား လို တဲ့ မကြား အပ် တဲ့ အသံ တွေ မကြာ ခဏ ကြား နေ,ရ,တော့၊
တပ် မ,တော် ဗိုလ် ချုပ် ကြီး များ သမာဓိ ခိုင် ရဲ့ လား ဆို တာ သံသယ တွေ ပွား ပါ တယ်။
မု သာ ဝါ ဒါ ဝေရာ မဏိ သစ္စာ ပဒံ သမာဓိ,ရာ မိ။ ဆို တဲ့ သီ,လ,အား လုံး ရဲ့ အ ချုပ် မု သာ ဝါ ဒ မုသား မ,ပြော မ,ရေး စိတ်,ဖြင့် ပင် မ,တွေး ဘဲ သမာဓိ ရှိ,မှ တိုင် ပြည် နှင့် လူ မျိုး တို့ အကျိုး ကို ဦး,ဆောင် သည်းပိုး နိုင် မှာ ပါ။
ခေါင် က မလုံ ရင် ကျီး ပဲ့ က ယို တာ မဆန်း ပါ ဘူး။
ခေါင် ကို လုံ အောင် အုပ် ပါ။.NLD အစိုး ရ,မှာ အပြည့် အဝ တာ ဝန် ရှိ ပါ တယ်။
ကာ ကွယ် ရေး ဝန် ကြီး ဌာ န က လည်း သမ္မတ ကြီး ၏ အာဏာစက် အောက် မှာ တည် ပါ တယ်။
သမ္မတ ကြီး ဦး ထင် ကျော် အ,နေ ဖြင့် ဒုက္ခ များ ကြား သံသရာ လည်,နေ,ရ ရှာ တဲ့,တို့ ဗမာ တိုင်းရင်းသားတိုင်းရင်းသူ က လေး နှင့် သက်ကြီး ရွယ် အို စစ် ဒဏ် ကြောင့် မစွမ်း မသန် ဖြစ်,နေ,ကြ ရ သူ တွေ ကိုယ် လေး လက် ဝန် ဖြင့် သား သည် မိ ခင် တွေ ဒီ လူ ထု ကြီး က တို့ ဗမာ မျိုး ဆက်,တွေ ပါ။ သမ္မတ ကြီး မ ကယ် ရင်,သေ ဖွယ် ရာ ရှိ,တော့ တယ် လို မျက် ရည် ခံ ထိုး နေ ခြင်း မဟုတ် ပါ။ သမ္မတ ကြီး ၏ တာ ဝန် ကို ကျေ ပွန်,အောင်,ဆောင်,ရွက်,စေ လိုတဲ့ အ တွက် သတိ ပေး ခြင်း ဖြစ် ပါ ကြောင်း။
Posted by Burman Managers,Engineers and Scientists at 7:05 PM No comments:
My favourite song -1
Posted by Burman Managers,Engineers and Scientists at 7:39 PM No comments:
ြိငိမ်းချမ်းရေး.မူးယစ်ဆေးဝါး နှင့် UWSA “၀”
https://www.facebook.com/pkl5010850/posts/1196656203731232 Chaw Kay Khaing added6new photos — with Akyi Taw and 11 others. 1 hr ·ြိငိမ်းချမ်းရေး.မူးယစ်ဆေးဝါး နှင့် UWSA “၀” October 28, 2016 UWSA “၀” တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ မိုင်းလားနယ်မြေမှာဝင်ရောက်. အခြေချနေတာဟာ ဒေသတည်ငြိမ်မှု ပျက်ပြားစေနိုင်တဲ့အတွက် … မိုင်းလားနယ်မြေကနေ ပြန်လည် ဆုတ်ခွာပေးဖို့ လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ … အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်နေ့က . “၀” တပ်ဖွဲ့ဟာ မိုင်းလားဒေသရှိ လွယ်ကျူဆိုင် … လွယ်ဆမ်ဆုံ … နဲ့ မိုင်းမ … တပ်စခန်း တွေက်ို ထိန်းချုပ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။ … မိုင်းလားအဖွဲ့မှ ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံမှာ နယ်မြေသတ်မှတ်ပေးပါက နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးမယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် … အိမ်နီးချင်း မဟာမိတ် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ UWSA “၀” တပ်ဖွဲ့က မိုင်းလားနယ်မြေအတွင်း အဓိကကျတဲ့ စခန်းတွေကို … ၀င်ရောက် သိမ်းပိုက်မှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ … UWSA အဖွဲ့ဟာ ၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ မိုင်းလားခေါင်းဆောင်အပေါ် မကျေနပ်မှုကြောင့် မဟာမိတ်အပေါ် ချိုးဖေါက်ပြီး စစ်အင်အား အလုံးအရင်းနဲ့ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့က … မိုင်းလားတပ်ရဲ့လွယ်ဆမ်ဆုံစခန်း… လွယ်ကျူဆိုင်းစခန်း… ဝမ့်နောင်ဟုတ်စခန်း …တွေကို ကျူးကျော်တပ်စခန်းချပြီး ရန်စခဲ့ပါသေးတယ်. အခုတစ်ကြိမ်ဟာ ဒုတိယအကြိမ် ရန်စခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ … “၀” တပ် ဖွဲ့အနေနဲ့ မိုင်းလား နယ်မြေကို ၀င်ရောက် နေရာယူနေတာဟာ စစ်ရေး၊စီးပွားရေးအရ အရေးပါတဲ့နယ်မြေဖြစ်နေတာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ သုံးသပ်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ … အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး မိုင်းလားနယ်ထဲမှာ ရောက်ရှိတပ်စွဲနေတဲ့ တပ်တွေအားလုံးရုပ်ဖို့ … တပ်မတော်ရဲ့ ညွှန်ကြားမှုကို UWSA က လက်မခံတာကြောင့်… ကျိုင်းတုံအရှေ့ဒေသနဲ့အထူးဒေသ ၄ မိုင်းလား နယ်ခြားတစ်လျှောက် … စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အပြင် ထိုင်းနယ်စပ် မိုင်းဆတ်ခရိုင်ဘက်တွင်လည်း စစ်ရေး တင်းမာမှုတွေ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ …… မိုင်းယန်းမြို့က ဝန်ထမ်းတွေဟာ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားမှာကို စိုးရိမ်ပြီး မိုင်းခတ်မြို့ပေါ်ကို တိမ်းရှောင်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ … စစ်တလင်းဖြစ်အောင် “၀”ကလုပ် နေတာလား။ ဘယ်သူ့အားကိုးနဲ့မိုက်နေတာလဲ။ … … “ဝ”အဖွဲ့ဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ နဲ့ ပြည်နယ်အဆင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ် ကို ဒုတိယအကြိမ် ရေးထိုးထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်ကို. . ထပ်မံမထိုးလိုဘဲ နိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းမှာ… တိုက်ရိုက်ပါဝင်လိုတာဖြစ်ပါတယ်။ … အဲဒီတောင်းဆိုချက်ကို တပ်မတော်နဲ့ အစိုးရက လက်မခံပါဘူး။ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်နေ့ နေ့လယ်၂ နာရီ အချိန်ကစပြီး မိုင်းလားနယ် နဲ့ကျိုင်းတုံနယ်ကြား … အကြီးဆုံးနယ်ခြားဂိတ် … ၀မ်တာ့ပင်းတံတားစခန်းကို တပ်မတော်မှ… သွားလာခွင့်အားလုံး ပိတ်လိုက်ပြီး အဆိုပါ ၀မ်တာ့ပင်းဂိတ်မှာ … တပ်မတော်ဘက်က သံချပ်ကာကား၊ တင့်ကားတွေအပြင် … လက်နက်ကြီးတွေလည်း … အသင့် အနေအထားပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ ၀မ်တာ့ပင်းဂိတ်နဲ့နီးစပ်တဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းက ပြောပါတယ်။ … … မိုင်လားနယ်မြေထဲကို… “၀” တပ်ဖွဲ့တွေ ၀င်ရောက်နေရာယူမှုဟာ နောက်ကွယ်က တရုတ်ရဲ့ကြိုးကိုင်မှု လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ တရုတ်နဲ့ အမေရိကန်တို့ရဲ့ အားစမ်းမှု ကြားထဲမှာ မြန်မာပြည်က မြေဇာပင်အဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမှာ ဘင်္ဂါလီတွေ ပြဿနာရှာလို့ … ဖြေရှင်းနေရချိန် အခု “၀”က ပြဿနာရှာပြန်ပြီ။ … … အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုစာရင်းမှာ … မူးယစ်ဆေးဝါးကုန်သွယ်မှု စွပ်စွဲချက် နဲ့ “ဝ” တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တချို့ကို… နာမည်ဆိုးစာရင်း သွင်းထားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကြာသေးမီက အမေရိကန် သမ္မတအိုဘားမားရဲ့ ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့တဲ့ဆန်ရှင်မှာ “၀” မူးယစ်ရာဇာတွေ ပါဝင်လာခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ … #ဘာ့ကြောင့်မပယ်ဖျက်ပေးရတာလဲ။ .. မြန်မာနိုင်ငံဟာ … #မက်သာအဖက်တမင်းစိတ်ကြွဆေးပြား အများဆုံး ထုတ်လုပ်ရာနိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး … မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှု… မှောင်ခိုရောင်းချမှုလုပ်ငန်းကို… အမေရိကန်အစိုးရ အလိုရှိနေတဲ့… ရာဇ၀တ်ကောင်တွေ ဦးဆောင်တဲ့ … UWSA အဖွဲ့က … လုပ်ကိုင်နေတယ်လို့… အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ .. အဲဒီိဖော်ပြမှုကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် … “၀” ဒေသမှာ မူးယစ်ရာဇာတွေဟာ… စီးပွားဖြစ် စိတ်ကြွဆေးတွေထုတ်လုပ်နေတယ်လို့ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ရာ အမှန်တကယ်လည်း ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေကြပါတယ်။ .. အမေရိကန်နိုင်ငံက သတ်မှတ်ထားတဲ့ “၀” နယ်မြေရှိ မူးယစ်ရာဇာတရားခံပြေး တွေကလည်း တစ်ယောက်နှစ်ယောက် . မဟုတ်ပါ စုစုပေါင်း ၈ ယောက်အထိရှိနေပါတယ်။ … အဲဒီမူးယစ်ရာဇာ ၈ ယောက်အဖြစ် … _ ဝှေရှောက်ခန်း၊ _ ဝှေရှောက်ယန်း၊ _ ဝှေရှောက်လန်း၊ _ ပေါက်ယူချန်း၊ _ ပေါက်ယူရီ၊ _ ပေါက်ယူဟွာ၊ _ ပေါက်ယူလိုင်၊ _ ပေါက်ဟွာချန်း … တို့ကို စွဲချက်တင်ထားတာ … ကမ္ဘာကသိနေတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ … UWSA ခေါင်းဆောင်ပိုင်း ၈ ဦးဟာ… မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုကို… အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၀၃) သန်းနဲ့… လည်ပတ်လုပ်ကိုင်နေကြောင်းနဲ့ … … ဝှေရှောက်ခန်းအား ၁၉၉၉ ခုနှစ်နို နိုင်ငံခြား မူးယစ်ဆေးဝါးဘုရင်များ သတ်မှတ်ပုဒ်မအရ … မူးယစ်ဆေးဝါးဘုရင်လို့ သတ်မှတ်ပြီး … ၎င်းကို ဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ သတင်းပေးပါက… အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၂) သန်းဆုချမယ်လို့… အမေရိကန်မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ DEA က ၂၀၁၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လ … ၂၅ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံနေရာ အနှံ့အပြားမှာ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ … … အချုပ်ပြောရရင် မူးယစ်ရာဇာ“၀”တွေဟာ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းရငွေတွေနဲ့ … တရားမ၀င် လက်နက်ခဲယမ်းတွေ ၀ယ်ယူပြီး စစ်အင်အား … တောင့်တင်းအောင် လုပ်လာတယ်။ … လက်နက်ခဲယမ်းတွေကို တရုတ်က ရောင်းချ ပေးခဲ့တယ်။ တရုတ်အနေနဲ့ “၀”ပြသနာကို သံတမန်နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းပေးမှာလား။ … ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင် တပ်မတော် နဲ့ သေချာညှိနှိုင်းပြီး၊ဆွေးနွေးပြီးတော့မှ လုပ်ရင်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ …… … အခု ၁၉၈၉ခုနှစ် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ် ပါတီက ခွဲထွက်ပြီးနောက် အနီးကပ်ဆုံးရှိခဲ့တဲ့… မဟာမိတ်တွေလည်းဖြစ်တဲ့ … မိုင်းလားအဖွဲ့အပေါ်မှာ … နိုင်ထက်စီးနင်းလုပ်ပြီး … ငြိမ်းချမ်းရေးစကားကို နားမ၀င်တဲ့ မူးယစ်ရာဇာတွေနဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်တို့ ဘယ်လို ရှေ့ဆက်ကြမလဲ… ?? မျက်နှာချင်းဆိုင်မလားး… ကျောခိုင်းမလားး … ဆိုတာ ကျမ တကယ် စိတ်ဝင်စားနေတာပါ ။ ။ ကိုးကား #ဇော်လင်းသန့် နေ့စဉ်သတင်းများ photo getty image #ckk လေးစားစွာမျှဝေသည် Chaw Kay Khaing's photo. Chaw Kay Khaing's photo. Chaw Kay Khaing's photo. Chaw Kay Khaing's photo. Chaw Kay Khaing's photo. +2 LikeShow more reactions CommentShare
Posted by Burman Managers,Engineers and Scientists at 10:03 PM No comments: